Hetsika fotoam-pialan-tsasatra : hanakoako ny mozika bà gasy | NewsMada
Hetsika fotoam-pialan-tsasatra : hanakoako ny mozika bà gasy
Mitosaka tsy an-kiato eto amintsika ny kolontsaina sy ny kanto vahiny. Toa makamaka sisiny ny tena antsika, toy ny bà gasy, araka ny nambaran’ny filohan’ny Sehatra Bà gasy. Manoloana izany, mihetsiketsika mafy ny fikambanana ka hanakoako ity mozika ity, indrindra amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao.
Fikambanana iray hamondronan-kery enti-miaro sy mitahiry ary mampahafantatra ny bà gasy ny Sehatra Bà gasy. Raisiny an-tanan-droa avokoa na ireo mpitendry sy mpihira bà gasy na koa ny olon-tsotra mankafy sy mandala izany. Misy ny hetsika efa fanaon’izy ireo isam-bolana, saingy amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao, ezahina ho mafimafy kokoa izany, hisarihana ny tanora.
Manomana hetsika telo lehibe ny Sehatra Bà gasy. Voalohany amin’izany ny amin’ny alahady izao, etsy amin’ny Tranompokonolona Analakely. Hotontosaina amin’io ny “Bà gasy an-tsehatra”, anehoana am-pitiavana ny hakanton’ny hira fahiny. Hifandimby hiaka-tsehatra, mandritra izany, ny tarika Angola Itokiana, Aro Kanton’ny fahiny ary i Lizah Raseta. Marihina fa tsy voafetra ny saran’ny fidirana amin’io seho io, satria tanjona ny hahalalan’ny sarambabembahoaka ity kanto iray ity.
Mihamaro hatrany ireo liana amin’ny bà gasy, indrindra ireo manan-talenta amin’ny fihirana. Manampy azy ireo ny Sehatra Bà gasy hiditra lalindalina sy ho matihanina kokoa amin’ity karazan-kanto ity. Tanterahin’izy ireo ao anatin’ny “Atrik’efa bà gasy” izany. Karazana atrikasa, fizarana traikefa izy ity, maimaimpoana ary misokatra ho an’ny olon-drehetra, tsy ankanavaka taona. Hotontosaina ny alarobia izao, eny amin’ny Ivotoeran’ny kolontsaina Malagasy (IKM) eny Antsahavola, ny amin’io volana aogositra io.
Fa manokatra lalana ho an’ireo miditra tsikelikely eo amin’ny tontolon’ny bà gasy ihany koa ny fikambanana. Anisan’izany ny fanehoana an-tsehatra ny talentan’izy ireo. Aorian’ny “Atrik’efa bà gasy” àry, hisy ny “Zara sehatra bà gasy”, ao amin’ny efitrano malalaky ny trano fiantohana Aro, ny asabotsy 6 aogositra izao. Araka izany anarany izany, hiaka-tsehatra haneho ny talentany ireo avy nanaraka fiofanana. Hanampy tosika azy ireo ny mpikambana sasany ao amin’ny Sehatra Bà gasy.
Nohamafisin’ny filohan’ny fikambanana fa tanterahina isam-bolana ireo hetsika telo ireo, satria tanjona ny hampahafantatra, hampahatsiahy ary haneho ny hakanton’ny bà gasy.